के दुई साता काठमाडौँ उपत्यका 'सटडाउन' गर्न लागिएको हो ? - Nepal Factcheck
के दुई साता काठमाडौँ उपत्यका ‘सटडाउन’ गर्न लागिएको हो ?
निश्कर्ष : काठमाडौँ उपत्यका दुई साता सटडाउन गर्ने शीर्षकमा आएका समाचार भ्रामक छन्। यसले उपत्यका नै बन्द हुने भ्रम पाठकलाई पर्न सक्छ। तर उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी गरेको सूचनामा ‘सटडाउन’ शब्द उल्लेख छैन। त्यसमा सो कार्यालयले जारी गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका केही सेवा प्रवाहमात्र बन्द गरिएको उल्लेख छ, पूरै उपत्यका सटडाउन भनिएको छैन।